LinkedIn သို့အီးမေးလ်လိပ်စာများထည့်နည်း Martech Zone
သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 30, 2012 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 15, 2017 Douglas Karr
LinkedIn တို့ သူ့ရဲ့ Add Connections ကဏ္ကိုပြောင်းလိုက်ပြီး၊ ကျနော့်အမြင်မှာအီးမေးလ်လိပ်စာတခုနဲ့အဆက်အသွယ်တခုကိုထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုသင်္ဂြိုဟ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဲ။ သူတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသေချာပေမဲ့အခုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆင့်နှစ်ဆင့်အစားအဆင့်လေးဆင့်ပါ။ ဤသည်ဖြစ်ကောင်းငါမိန့်ခွန်းများသို့မဟုတ်ညီလာခံကနေပြန်ရောက်လာသောအခါငါ LinkedIn ကအတွက်အများဆုံးသွားရောက်ကြည့်ရှုစာမျက်နှာ။ ငါစုဆောင်းသောသူတို့ကို၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များကိုဖြတ်သန်းသူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်။
ကလစ်နှိပ်ပါ Connections ထည့်ပါ သင် LinkedIn သို့ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ညာဘက်ထိပ်ပေါ်မှာ။
အကိုကလစ်နှိပ်ပါ မည်သည့်အီးမေးလ်မဆို လက်ျာဘက်၌ icon ကို။
အောက် ချိတ်ဆက်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းများ, ကလစ် တစ် ဦး ချင်းစီအီးမေးလ်ဖြင့်ဖိတ်ကြားပါ.
ဒီဇင်ဘာ 1, 2012 မှာ 11: 39 AM
၎င်းတို့ကို အမည်ဖြင့်သာ ရှာဖွေပြီး ချိတ်ဆက်ရန် ကလစ်နှိပ်ပါ။
1:2012 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 1, 18 တွင်
တစ်ကြိမ်မှာ? နည်းလမ်းမရှိ! ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အား ၎င်းတို့အားလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် ထည့်သွင်းနိုင်စေပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ 2, 2012 မှာ 11: 57 AM
ဟုတ်တယ်၊ ဒါက မင်းနဲ့ငါ အမြဲတမ်း သဘောမတူတဲ့ နယ်ပယ်တွေထဲက တစ်ခုပဲ။ ငါသူတို့နှင့် အမှန်တကယ် “ချိတ်ဆက်” မထားပါက လူများကို LinkedIn သို့ မထည့်ပါ။ ချိတ်ဆက်မှုမည်မျှရနိုင်သည်ကို ကြည့်ရန် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဂိမ်းမဟုတ်ပါ။
ပွဲတစ်ခုသွားတဲ့အခါ လူငါးယောက်ကို အဆက်အသွယ်အဖြစ် ပြန်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ SalesForce မှာ MQLs သို့မဟုတ် SQLs တွေအဖြစ် ရောက်သွားမယ်။
2:2012 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 22 တွင်
တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းကတ်ကို ကျွန်ုပ်အား ပေးဆောင်ခဲ့ပါက သို့မဟုတ် ဆိုက်မှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်နှင့် ချိတ်ဆက်မိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ ကျွန်တော် ဒီဆက်ဆံရေးကို အလွဲသုံးစားမလုပ်ပါဘူး – ဒါပေမယ့် အရင်းအမြစ်တွေကို ရှာဖွေရာမှာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ တကယ်ကို အဆင်ပြေပါတယ်။ ချိတ်ဆက်မှုအရေအတွက်ကို ငါဂရုမစိုက်ဘူး၊ ငါ့ကွန်ရက်ရဲ့ လက်လှမ်းမီမှုကို ဂရုစိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်ဖြစ်တယ်!